ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ (SCO)က အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ပြုလုပ် - Xinhua News Agency
နယူးရောက်ပြည်နယ် ၌ အိုမီခရွန် အတည်ပြုလူနာ ၅ ဦးတွေ့ရှိ
ရုရှားနိုင်ငံ အိုရန်ဘာ့ဂ်ပြည်နယ် Donguzလေ့ကျင့်ရေးကွင်းတွင် ကျင်းပသည့် “ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင် ၂၀၂၁” ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု(SCO)အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တရုတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အစ္စလာမ်မာဘတ် ၊ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ (SCO) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုအား ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၌ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“Pabbi-Antiterror-2021,” အမည်ပေးထားသည့် ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲလာသည့်အခြေအနေနှင့်အတူ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသော နိုင်ငံတကာ နှင့် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေး အခြေအနေကြားတွင် ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း နှင့် အကြမ်းဖက်မှု ၊ ခွဲထွက်ရေးဝါဒ နှင့် အစွန်းရောက်ဝါဒ အင်အားသုံးရပ်သည် အခြေအနေပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်း၏ အရေးသာမှုကို ယူရန် ကြိုးစားကာ SCO ဒေသတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်ထိုးဖောက်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလေ့ကျင့်မှုအား အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်နယ်နိမိတ်များအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအား အကဲဖြတ်ခြင်း ၊ စုဆောင်းခြင်း ၊ မျှဝေခြင်း ၊ ဖလှယ်ခြင်း အသွင်သဏ္ဍန်များအား ပထမဆုံး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် လက်ဖြောင့်ပစ်ခတ်မှု ၊ နေအိမ်အဆောက်အဦအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုတန်ပြန်တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ဆောင်မှု နှင့် ဓားစာခံကယ်ဆယ်မှု အပါအဝင် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုအား ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေစိုးမိုးရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် SCO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အခွင့်အာဏာဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုအား ပြည်ပတွင် လက်နက်ခဲယမ်းအစစ်များနှင့်အတူ ပထမဆုံးအကြိမ် ပူးပေါင်းပါဝင်လေ့ကျင့်မှု ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်မည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အား ဥဇဘတ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ Tashkent မြို့၌ ကျင်းပသည့် ဒေသတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဖွဲ့စည်းမှုကောင်စီ(RATS) ၃၆ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးအတွင်း ကြေညာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
ISLAMABAD, Oct.4(Xinhua) — The Shanghai Cooperation Organization (SCO)’s member states heldajoint anti-terrorism exercise in Pakistan from Sept. 21 to Monday.
The joint exercise, entitled “Pabbi-Antiterror-2021,” came amid increasingly complex international and regional security situation, with the situation in Afghanistan suddenly changing, and the three forces of terrorism, separatism and extremism trying to take advantage of chaos and infiltrate the SCO region.
The exercise was conducted in two stages, during which the SCO member states first conducted simulated exchanging, sharing, collection and evaluation of anti-terrorism intelligence within their own borders, and then carried out joint anti-terrorism exercises, including sniping action, indoor counter-terrorism action and hostage rescue.
This was the first time for China’s anti-terrorism law enforcement forces to participate with live ammunition abroad inajoint anti-terrorism exercise by the competent authorities of the SCO member states.
The decision to hold the joint exercise was announced during the 36th meeting of the Council of the Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) held in Tashkent, Uzbekistan. Enditem
Photo – Chinese troops participate in the closing ceremony of the “Peace Mission 2021” counter-terrorism military drill of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states, at the Donguz training range in Russia’s Orenburg Region on Sept. 24, 2021. The “Peace Mission 2021” counter-terrorism military drill of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states wrapped up on Friday in Russia. (Xinhua/Mei Shixiong)
“တရုတ်နိုင်ငံက ကျွန်တော်တို့အတွက် စံပြဖြစ်ကြောင်း” ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးပြော
တရုတ် သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်၏ အရေးကြီးစာအုပ်စာပေများကို（SCO）အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်ဝေခြင်း မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား ပေကျင်းမြို့တွင် ကျင်းပ